China KN95 GB2626-2006, GB2626-2019 ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | Gubang
· Aha aha: KN95 Disposable particulate Respirator
· Ikike: YIRENTANG
· Nlereanya: KN95
· Yiri yledị Ejiji: Akwa isi
· Agba: White
· Ihe: Polyester, Electric Static Meltblown
· Na valvụ: NA-enweghị ma ọ bụ na-enweghị
· Ọkọlọtọ: GB2626-2006, GB2626-2019
A na-ezube ihe nkpuchi ndị a maka nchebe megide aerosol nke enweghị mmanụ; oge ojiji mgbochi nwere ike ide. Ha na-adịgide adịgide nke ukwuu ma nwee ihu dị nro na nkasi obi dị mma nke nwere ntutu dị nro na ịchekwa isi ya maka dabara adaba. E nwere obere ume iku ume maka imewanye nkasi obi ọrụ.
Maka ojiji megide particulate Aerosols enweghị mmanụ
Inhalation Nguzogide Delta P (85LPM + 1LPM): <20mmH2O
Mgbapu iku ume Delta P (85LPM + 1LPM): <25mmH2O
Filtration arụmọrụ: >95% maka ụmụ irighiri ikuku nke 0.3micron
Ike isi isi: 20N / 10s
Disposable Ihu Nkpuchi KN95
KN95 mgbochi nje earloop na-abụghị kpara disposable ihu nkpuchi
China Suppliers N'ogbe Manufacturer Custom Earloop Disposable Non kpara 5 Ply Face Mask
Na mgbakwunye na mmetọ ikuku, ọgụ a na-akwụ anwụrụ ga-emebi ahụ ike anyị, na ndị mmadụ gbakọtara, na mgbasa nke ụmụ irighiri mmiri nke ọrịa nwekwara ike bụrụ ihe iyi egwu ahụike anyị, na-elekwasị anya na ahụike iku ume
Atụmatụ maka Anti Virus Face Mask:
-Function: Pollen mgbochi, nke ahu anataghi free, ájá àmà
-Ergonomic imewe, ọzọ ihu nchebe
- Enwere ohere iku ume, ume iku ume
-Adopt elu àgwà Myọcha mmewere, rụọ ọrụ nke ọma dustproof
Ndi KN95 Nkpuchi Nkpuchi gi bu ezigbo? Wzọ 3 You Pụrụ Inwale
KN95 nkpuchi ihu nke ezigbo akara enyere aka kpuchie ndị dike ahụike anyị na ndị ọrụ ndị ọzọ na-arụ ọrụ site na nkwekọrịta COVID-19. N'ihi mmụba a na-achọwanye, ndị na-emepụta ihe na China na-ewepụta ihe dị narị nde abụọ kwa ụbọchị, mana mmiri dị n'etiti ọkọnọ na mkpa na-eto. N’ihi ya, ihe ndị na-abụghị eziokwu na-abata n’ahịa ahụ, a na-erekarị ya ọnụ ahịa. KN95 Face Mask 5 Pack fromgbọ mmiri si USA Na StockPollen - Ihe mkpuchi KN95 nwere ike ichebe gị na pollen. Ihe nzacha anyị nwere arụmọrụ dị elu karịa 95% na 0.3 pm urughuru size, ebe nkịtị pollen ahụ bụ ihe dịka 10 - 1000 pm nha. Animal Allergens - Ihe nkpuchi ihu ihu nke KN95 nwere ike ichebe gi site na nsi umu anụmanụ. Arụmọrụ nke n'elu 95% na 0.3 pm urughuru size, anụmanụ allergen ahụ bụ ihe 5 KN95 Ihu Masks Frontline Ihu MasksKN95 Ihu Masks (4 Layer). Ihe na-emegide ihe (Na-abụghị nke ịwa ahụ). Non kpara akwa + Polypropylene owu. Ọkachamara KN95 na-echekwa ihe nkpuchi, 95% na-edozi ájá, nje bacteria na ihe ndị ọzọ na-emerụ ahụ, bụ ihe nkpuchi magburu onwe ya iji gbochie nje virus na influenza.
Nke gara aga: 3 Ply Disposable Nchebe nkpuchi
Osote: KN95 GB2626-2006, GB2626-2019 (Na ntinye ume)
China Ce Kn95 Onye mgbapụta
China Ce Kn95 ndị ​​na-azaghachi
China Ndị na-aza ajụjụ Kn95
China Kn95 na-azaghachi
Mgbapụta China Kn95
Ndị na-anabata ndị China Kn95
Ihu mkpuchi KS-9005
Ihu mkpuchi KS-9008
3 Ply Disposable Nchebe nkpuchi